3 Fomba samihafa amin'ny tranokala samihafa amin'ny Semalt
Tonga ny dikany sy ny filana ny famongorana na famafazana angona avy amin'ny tranokala mihamitombo hatrany amin'ny fotoana. Matetika dia misy ny ilàna ny hanangona angona avy amin'ny tranokala fototra sy avo lenta. Indraindray isika dia mamoaka ny angon-drakitra, indraindray dia mila mampiasa fitaovana toy ny fanangonana angon-drakitra manual dia tsy manome ny valiny marina sy marina.
Na manahy momba ny lazan'ny orinasa na ny marika ianao, te-hanara-maso ireo mpikirakira aterineto manodidina ny raharaham-barotra, mila manao fikarohana ianao na tsy maintsy mihazona rantsantanana Impulsan'ny orinasa iray na vokatra iray manokana, dia mila mametaka foana ny angona ianao ary mamadika izany amin'ny endrika tsy ara-organisa ka hatrany amin'ny rafitra.
Eto isika dia mila miresaka momba fomba 3 samihafa mba handraisana ireo angona avy amin'ny tranonkala - pc repair Palo Alto.
1. Manangana ny mpiloka anao manokana.
2. Ampiasao ireo fitaovana fanariana fako.
3. Ampiasao ireo angon-drakitra mialoha.
1. Build your crawler:
Ny fomba voalohany sy malaza indrindra amin'ny fanangonana ny angona angon-drakitra dia ny manangana ny mpandroba anao. Noho izany dia tsy maintsy mianatra teny fandaharana amin'ny programa ianao ary tokony hanana fifehezana mafy momba ny teknikan'ny asa. Ilainao ihany koa ny mpizara skalable sy malefaka mba hitehirizana sy hiditra amin'ny votoaty na tranonkala. Iray amin'ireo tombontsoa lehibe indrindra amin'ity fomba ity dia ny fampiasana ny mpitsikilo araka ny fepetra takiana aminao, ka manome anao ny fanaraha-maso tanteraka ny dingan'ny data. Midika izany fa hahazo izay tadiavinao ianao ary afaka manakona ireo angona avy amin'ny tranonkala maro toy izay tianao ary tsy hiahiahy momba ny teti-bola.
2. Ampiasao ny fitaovana enti-kitondro na ny fitaovana famafàna:
Raha mpitoraka bilaogy matihanina ianao, programa na webmaster, dia mety tsy manam-potoana hanamboarana programam-pamokarana. Amin'ny toe-javatra toy izany, tokony hampiasa ireo fitaovana efa misy tranga na fitaovana fanariana fako. Import. io, Diffbot, Mozenda, ary Kapow dia sasantsasany amin'ireo fitaovana tsara indrindra (web) amin'ny tranonkala tsara indrindra amin'ny aterineto. Izy ireo dia tonga amin'ny dikan-teny maimaim-poana sy karama, ka mahatonga anao ho mora ho anao ny manala ny angona avy amin'ny toerana tianao indrindra avy hatrany. Ny tombontsoa lehibe amin'ny fampiasana ny fitaovana dia ny hoe izy ireo dia tsy hamoaka ny angona ho anao fotsiny fa handamina sy hanorina azy koa araka ny zavatra takinao sy ny andrandrainao.Tsy hanam-potoana hametrahana ireo programa ireo ianao, ary hahazo ny valiny marina sy azo antoka foana. Ankoatra izany, tsara ny fitaovana (web) amin'ny tranonkala raha toa ka mifampiraharaha amin'ny loharanom-pahamendrehana isika ary te-hanara-maso ny kalitaon'ny angon-drakitra mandritra ny dabam-pako. Azo atao ho an'ny mpianatra sy ny mpikaroka izany, ary ireo fitaovana ireo dia hanampy azy ireo hanao fikarohana amin'ny Internet araka ny tokony ho izy.
3. Data efa nafarana avy amin'ny Webhose. io Platform:
The Webhose. Ity sehatra ity dia manome antsika fahazoana tombony amin'ny fampahalalana mahasoa sy mahasoa. Miaraka amin'ny vahaolana data-as-a-service (DaaS), tsy mila mikirakira na mihazona ny fandaharanao amin'ny tranonkalanao ianao ary ho afaka haka mora foana ny data. Ny ilaintsika rehetra dia ny manasitrana ny angon-drakitra ampiasaina amin'ny API mba hahafahantsika mahazo fampahalalana manan-danja sy marina. Amin'ny herintaona, afaka mahazo fidirana amin'ny tranonkala ara-tantara miaraka amin'ity fomba ity ihany koa izahay. Midika izany fa raha nisy zavatra very teo aloha, dia ho afaka hiditra ao amin'ny ordinater Achieve amin'ny Webhose. io.